शरीरमा मुसा आएर चिन्तित हुनुहुन्छ, यसो गर्नुस् केहि दिनमै मुसा गायब हुन्छ - JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
शरीरमा मुसा आएर चिन्तित हुनुहुन्छ, यसो गर्नुस् केहि दिनमै मुसा गायब हुन्छ
हाम्रो छालामा जिवाणुको कारणले गर्दा स–सानो मासु पलाउने गर्दछ । जस्ले हाम्रो छालाको माथिल्लो तहमा असर गर्दछ । जस्ले गर्दा मासु छिटो बढ्ने हुन्छ । साधारणतया गाँठोगुठ्ठि धेरै खतरनाक हुदैंन । गाँठोगुठ्ठि प्रायजसो घाँटीमा आउने गर्दछ । यीनीहरु धेरै नै नराम्रो देखिन्छन् । गाँठोगुठ्ठि सानो मासु झुण्डिएको जस्तो देखिन्छन् । त्यसैगरी मासुको र यसको रङ्ग समान हुन्छ । यसैकारणले गर्दा मानिसहरु यसलाई हटाउन चाहन्छन् । गाँठोगुठ्ठिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ ?
ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु : गाँठोगुठ्ठि शरीरमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दछ । तपाइँले यस समस्याको उपचार गर्दा गाँठोगुठ्ठिमा लगाईसकेपछि त्यस सामाग्रीलाई अरु भागमा प्रयोग नगर्नुहोस् । र अरुलाई पनि गर्न नदिनुहोस् । तपाइँलाई मधुमेह छ भने , खुट्टाको गाँठोगुठ्ठिको उपचार गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् । आफ्नो अनुहार वा संवेदनशील अङ्ग जस्तै स् प्रजनन अङ्ग , मुख वा नाकको प्वालमा भएको गाठोगुठ्ठिलाई घरेलु उपाय अपनाई हटाउने प्रयास नगर्नुहोस् ।
परिवार नियोजनबारे जानकारी नपाउँदा ३३ बर्षमा १४ सन्तानकी आमा ! गुल्मी । स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतनाको अभावमा मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु कतिसम्म पीडित छन भन्ने उदाहरण बनेकी छिन् गुल्मी छत्रकोटकी रिता नेपाली । परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक औषधि र जन्मान्तरको फरकबारे जानकारी नपाउँदा उनी ३३ बर्षको उमेर भित्र १४ सन्तानकी आमा बनिन् ।
छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्वर ६ की रिता नेपाली १४ सन्तानकी आमा हुन् भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । अहिले ४० बर्षमा हिड्दै गरेकी उनका जेठा छोराको उमेर १८ वर्षको छ भने सवै भन्दा कान्छी सन्तानको उमेर ७ वर्ष भयो । १४ वर्षको उमेरमा हुँगाका पदम नेपालीसंग विवाह गरेकी नेपालीले १५ वर्षको उमेर देखि सन्तान जन्माउन थालेकी हुन् ।
१५ देखि ३३ वर्षको उमेर भित्रमा १४ सन्तान जन्माएकी उनी अहिले पनि निरोगी देखिन्छिन् । श्रीमान पदम नेपाली शारीरिकरुपमा अशक्त छन् । छोरा वा छोरीको चाहनामा उनले यति धेरै सन्तान जन्माएकी होइनन । उनले न परिवार नियोजनबारे जानकारी पाइन नत गर्भ निरोधक औषधिको बारेमा नै ।
धेरै सन्तान पाउँदा पर्ने असरको सम्बन्धमा चेतनाको कमी र जन्मान्तरको फरकबारे पनि केही जानकारी नपाउनु रिताको लागि कमजोरी बन्यो । उनका १४ सन्तान मध्ये ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ७ वर्षीया कान्छी छोरी कक्षा तीनमा अध्ययनरत छिन् । जेठा छोरा र जेठी छोरीबाट गत वर्ष एक / एक सन्तान जन्मिएपछि हजुरआमा हुन पाएकोमा रिता थप दङ्ग छिन् ।